Dreams Khabar आर्थिक अभावले मृगौला पीडित सावित्रिको उपचारमा समस्या
आर्थिक अभावले मृगौला पीडित सावित्रिको उपचारमा समस्या
उर्गेन तामाङ, भदौँ २९, ड्रिम्स -
मक्वानपुर राक्सिराङ गाँउपालीका ५ की मृगौला पीडित सावित्रि प्रजाको आर्थीक अभावका कारण उपचारमा समस्या परेको छ । दुवै मृगौला पीडित प्रजालाई उपचारका लागी काठमाण्डौँ लगीए पनि आर्थिक अभावका कारण विना उपचार घर फर्काउनुपरेको परिवारको भनाई छ ।
महेन्द्र किरण मावि मनहरीमा कक्षा ७ मा अध्यनरत १४ वर्षीय सावित्रिलाई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि यहि भदौँ २१ गत्ते उपचारका लागी काठमाण्डौँ लगीएको थियो । रिण खोजेर लगेको १५ हजार रुपैयाँ पनि ३ दिनमा सकिए पछि केहि औषधी लिएर विना उपचार घर फर्कनु परेको सावित्रिकी बुवा आस बहादुर प्रजाले दुखेसो गर्नुभयो । अब चाँडै डाईलासिस गर्नुपर्ने भएकाले सकेको आर्थिक सहयोगका लागी परिवारले सवैसँग आग्रह गरेका छन ।
सावित्रि गएको १ महिनादेखि स्वास्थ्य समस्याका कारण विद्यालय जान नसकेको परिवारको भनाई छ । पुर्वसभासद गोविन्दराम चेपाङ, प्रदेश सांसद सन्तराम चेपाङ, गामवेसी चेपाङ केन्द्रका सञ्चालक केपी किरण सर्मा लगायतको टोली शुुक्रवार सावित्रिको अवस्था बुभ्mन परिवारलाई भेट्न उनको घर पुगेको थियो ।
यसै क्रममा बकुलहर रत्ननगर अस्पतालका मेडिकल सुपरी ट्ण्डेण्ट एबं बरिष्ठ दन्त रोग विशेशज्ञ डा अजय न्यौपानेले सावित्रिको उपचारमा सहयोग गर्ने बचन दिनुभएको छ । शुक्रवार दिउँसो डा अजय न्यौपानेले मलाई फोन गरेर आफ्नो अस्पतालमा मिर्गौलाको डाइग्लासिस सेवा रहेको र शर्मिला र उनको अभिभावकलाई खान बस्न सबै ब्यबस्था गरिदिने बचन दिनुभयो केपि किरण सर्माले भन्नुभयो उहाँले प्रजाको उपचार कहा ? के, कसरि ? गर्न सकिन्छ सबै समाधान खोजिदिने बचन पनि दिनु भएको छ । सर्माका अनुसार सावित्रिलार्य अभिभाबक सहित आइतबार डा अजयको सम्पर्कमा लगीने छ । डा अजय न्यौपाने र उहाकी श्रीमती सरु थापा न्यौपानेले चेपाङ्ग समुदायको उत्थान, उन्नति र सम्बर्दनको निम्ति विगतबाटनै सहयोग, सहकार्य गर्दै आउनुभएको छ ।
सावित्रिकी दाई निरञ्जन राना प्रजाले आप्mनो फेसबुकमार्फत बहिनीको उपचारमा आर्थिक अभाव भएकाले सहयोगको अपिल गर्नुभएको छ ।
अपिल जस्ताको तस्तै
आदरणीय मेरो दाजुभाइ दिदि बहिनि आमा बुबा सम्पुर्णलाई दस औला जोडी आपिल गर्न चाहन्छु । आज मेरो आफ्नो आँखा अगाडी बहिनी छत्पती रहेको छ तर म केही गर्न सकि रहेको छैन आज मेरो बहिनी साबित्रि प्रजा को दुबै मृगौला फेल भाको कुराले म सारै चिन्तित छु । हाम्रो आर्थिक कम्जोरीका कारण चाहेर पनि उपचार गरन सकिएको छैन । आज म तपाईं हरु सामु मेरो बोहिनीको लागि यो दुखी दाई तपाईंहरु सामु भिख मागी राकोछु । कृपया जो कोहि ले सयोग गर्नु चाहनु हुन्छ भने बिरामी बहिनीको बुवा आसा बाहादूर प्रजाको मोबाईल न ९८४५५९९३९० र ममि मिठु माया प्रजा ९८४५४१६८१७ मा सम्पर्क गरि सयोगी गर्नसक्नुहुन्छ । धन्यवाद ।
बिरामी बहिनीको दाइ म निरन्जन राना प्रजा, मक्वानपुर राक्सिराङ गाउपालिका ५ ।